ठीक छ पर्खि बसे बस्त्स म छिट्टै आउँदैछु
धन्य्बाद एकलव्य जि । तपालाई र dautari साथीहरुलाई श्रीकृष्णजन्माष्टमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना पनि ।
श्रीकृष्ण लीला को नाटक धेरै पटक हेरियो । मेरो गाउ पर
काफल घारि भन्ने गाउ छ । ति गाउलेहरुले केही बर्ष पहिले श्रीकृष्ण बालन निकालेका थिए । पोखरामा पनि निकै देखाए श्रीकृष्ण उक्त बालन।
श्रीकृष्ण को जन्म्, बध आदी सबै देखैन्छ । तर श्रीकृष्णको मृत्यु कसरी भयो त्यो कतै भनेको पाएको छैन । कसैलाई जानकारी होला ?
जय श्रिकृष्ण !!
ब्लगमा राजनीति, साहित्य वा अनौपचारिक गफ मात्रै हैन धर्म र संस्कृति पनि यसरी प्रवाह हुनु मलाई पनि निक्कै खुशी लाग्यो । जे होस छोटो चर्चामा कृष्णको जीवन दर्शन र आजको दिनको महत्व राम्ररी झल्केको छ । मेरो पनि हार्दिक धन्यावाद ।
अब थोरे कुरा श्रिकृष्णको मृत्युको बारेमा :
कृष्णको जीवनकालको अंतिम घटनाको बारेमा मैले सुनेको आख्यान भने यस्तो छ:
एक दिन साँझमा भगवान एउटा वृक्षको मुनि आराम गरी रहेका थिए । शरिर रूखले छेकिएको र खुट्टाको औंला मात्रै परबाट देख्‍दा कुनै “जरा” नाम भएको व्याधाले हरीणको आखाँ जस्तो लागेर बाँड चलाउँछ र सोही चोटको बहानामा उनले भौतिक शरिर छोडछन ।
सो स्थान हालको भारतको गुजरातमा पर्छ भन्ने कतै पढेको सम्झना छ, जुन स्थानमा श्रीकृष्णलाइ बाँड हानीएको थियो सो स्थानलाई हाल `भालुका तीर्थ' पनि भनिन्छ र सोहि स्थानमा अहिले श्रीकृष्णको मन्दिर पनि बनेको छ ।
अरु साथिहरुबाट पनि यसबारेमा अरु बिस्तृत जानकारी मिल्छ भन्ने आशा गरेको छु ।
हो ठरकिसर वास्तवमा म पुराण र मिथकको त फ्यान नै हुँ । म धार्मिकता र मिथकीय कथाको बीचको अनुरागबाट यो कुरा भन्दैछु । सानोमा महाभारत, रामायण र कृ्ष्ण चरित्र र श्रीमद्बागवतका नेपाली अनुवाद हरूलाई गाउँमा रहेको घरको पिँढिमा बसी धेरै हजरूरबा हरूलाई आनन्दित तुल्याउँदै सुनाउने गर्थेँ । मलाई हिन्दू, ग्रीक , रोमन र ओल्ड टेष्टामेण्टका मिथकमा साह्रै रूची छ ।
तपाइँले थालेको त्यो कथा साँचो हो, तर श्रीकृष्णको अन्त्यको कथा केही विस्तारमा जाँदा यस्तो छ:
Madhu Madhurya said...
Pls. tell us how he could be equally POPULAR for 16000 Gopiniz in the same time.
त्यति बेलाको भारतीय उपमहाद्विपको समाज व्यवस्था अनुसार , सम्भवत: सबैभन्दा पराक्रमी ठानिएका राजकुमार वा वीरहरूले , कुनै राजदरवारमा राजकन्याहरूको स्वयम्वर घोषणा गरिएपछि आँफूलाई धनुर्विद्या र शस्त्रास्त्र परिचालन कौशलमा सबैभन्दा विशिष्ट साबित गरी
प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो र यसो नगर्नु कायरता ठहर्थ्यो । जहाँसम्म १६१०० पत्निको प्रसंग छ, यो विषयमा धेरै मान्छेहरू कुरा नबुझी बोल्ने गरेको मैले पाएको छु ।
जरासन्ध नामको डरलाग्दो अत्याचारी दानव थियो। उसको कैदमा संसारभरबाट उसले राम्री ठानेका केटीहरूलाई जबर्जस्ति अपहरण गरेर वा गर्न लगाएर थुनेको थियो । यो डरलाग्दो दानवसंग कृष्णको २ पटक युद्ध भएर पनि उसको अन्त्य हुन सकिरहेको थिएन किनभने ,
जरासन्धको मृत्यू कृष्णको नभएर भीमसेनको हातबाट हुनु उसको कालगतिमा थियो। अन्तमा, एक दिन भीमसेन, अर्जुन र कृष्ण गएर जरासन्धलाई भीमसेनसंग युद्ध लड्न ललकार दिए । २७ दिन घमासान युद्धमा नतिजा नआए पछि २८ औँ दिनमा भीमसेन थाक्दै गए । तर जरासन्धको जाँघमा ( लोइन) उसको कमजोडी छ भन्ने थाहा पाएका कृष्णले , एउटा घाँसको त्यान्द्रो टिपेर त्यसलाई बीचबाट चिरेर देखाए । यसको संकेत बुझेका भीमले , जरासन्धलाई उसका दुइटा खुट्टा फट्टाएर च्यातेर मार्न सके ।
यसरी जरासन्धको अन्त्य त भयो , तर जरासन्धको कैदबाट मुक्त गरिएका १६१०० महिलाहरूले कृष्णलाई समस्या खडा गरे । उनीहरूले भने “ हामी जरासन्धको कैदमा थुनिएर उसको नियन्त्रणमा थियौँ र हाम्रो पालन पोषणको जिम्मा उसको थियो । तर अब, हामीलाई स्वतन्त्र भयौ भन्दैमा ,हाम्रो समाजले हामीलाई अपनाउने छैन र हाम्रो जाने ठाऊँ कहाँ छ ? कृष्ण, कि त हामीलाई अपनाउनुस् र हाम्रो जिम्मेवारी उठाउनुस् हैनभने हामीलाई जरासन्धको कैदबाट मुक्त गरेर
तपाईँले अझै ठूलो विपत्तिमा उभ्याइदिनुभएको छ” । यस्तो परिस्थितिमा , ती सबै १६१०० कैदी महिलाहरूलाई श्रीकृष्णले स्वीकार गरी उनीहरूको पालनपोषण, ऐश आराम र आवश्यकताको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको वर्णन धार्मिक ग्रन्थहरूमा पाइन्छ । त्यो मात्र हैन , सामाजिक अवगाल र अपहेलनाबाट जोगाउन , कृष्णले यी सबै महिलाहरूलाई आफ्नो पत्निको मान्यता दिए ता कि अपहरित भएका र आफ्ना परिवारले समेत राक्षसी डरका कारण आफ्नो भनी स्वीकार गर्न नसकेका यी असहाय महिलाले एउटा विश्वविजयी पुरुषको संरक्षण पाउन सके । तत्कालीन
समाजको चरित्र अनुसार एउटा प्रभावशाली पुरुषको पत्नि बनेका उनीहरूलाई समाजले हेप्न पनि पाएन वा सकेन होला ।
हाम्रो अहिलेको समाजशास्त्रीय र राजनीतिक व्यख्याले यो मिथकीय कुराको सत्यलाई निरूपण गरेर तर लाग्ने कुरा हैन , तर पौराणिक आख्यान र किंवदन्तीमा जीवीत वर्णनहरूलाई पनि तिनको पूर्णतामा हेर्यो भने क्रमवद्दता र क्रमसंगति नपाइने हैन । धर्म, पुराण वा मिथक
विज्ञान हैनन यहाँ वर्णित कुरालाई कहिले कथा, कहिले विम्व वा प्रतीकको रूपमा बुझ्दै त्यहाँ निहित दर्शन, लक्षणा र व्यञ्जनालाई बुझ्यो भने केही न केही काम लाग्ने कुरा फेला पर्न सक्छ । धर्म र आस्थालाई empirical truth को कसीले सत्य साबित गर्न सकिन्न , यो त केवल मान्छेको विश्वासमा जीवित वा नीर्जीव बनेको हुन्छ । राजनीतिक विचार वा अन्य दर्शनको औचित्यता पनि तिनका विश्वासीहरूलाई मात्र रहने आग्रही सत्य हुन्, सापेक्ष सत्य जस्तो । निरपेक्ष वा पूर्ण सत्य स्वयं पनि सायद एउटा मिथ नै होला । अहिलेलाई यत्ति ।
धन्यवाद समय र जिज्ञाषा दुवैको लागि ।
अहिलेको समयमा थोरै धेरै भए पनि धार्मिक कुरा जान्ने मौका पाए...यसका लागि एकलब्य ज्यु लाई धन्यवाद !!